शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०४ : ५६
गोरखाको क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बाबुराम भट्टराई त्यसै पनि चतुर नेताका रुपमा चिनिन्छन्। तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट विजयी भएका उनले यतिबेला नयाँ शक्तिको जरोकिलो नै उखेलिसके।
मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएकी विद्या भट्टराईले पुस १ गते सांसदका रुपमा सपथ लिइन्।
हेर्नुस न, हिजोआज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रापा) अध्यक्ष कमल थापा कति फुर्सदिला ! तीन साताको अमेरिका बसाइपछि नेपाल फर्किए ।
हाम्रा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई कस्ता व्यक्ति हुन् भन्ने कुराको छनक एउटै घटनाले दिन्छ। मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै उनले पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा साँझको आरति शुरु गर्नुअघि राष्ट्रगान बजाउन निर्देशन दिएलगत्तै उदाङ्ग भएको हो।
पदका लागि कति हदसम्मको लाज पचाउँछन् नेताहरुले भन्ने उदाहरण समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बन्न पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिरको शुभ मुहूर्तसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीको पदै खुस्काइदिए।
नेपालको मौसमी कुरा
हुन त नेपालमा मौसमी कुरा गर्ने नेताको के खाँचो ? पायो कि ठोकिहाल्छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसै साता मौसमी भाषण ठोकेछन्।
नेकपासँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको समाजवादी पार्टी अहिले सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा दोधारमा छ। पार्टीले सरकार छोड्ने वा नछोड्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न संघीय परिषद र केन्द्रीय समितिको बैठक नै बोलाएको छ।
कसैको ओरालो यात्रा, कसैको उकालो पनि हुनसक्छ। अब अहिलेको प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै हेर्नुस् न, उनको कसरतले भ्यायो भने उनी सभामुख हुन रत्ति पनि छैन !
राष्ट्रपतिको उड्ने शौख
व्यक्तिको शौख पनि अनेक ! अब हाम्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै हेरौँ न। कहिले उनी आफू सिंहासनमा बसेसरी आकर्षक कुर्सीमा बसेर दशैँका टीकाधारीलाई सामान्य पिर्का पनि नराखी टीका लगाइदिन्छिन् त कहिले १८ करोडको गाडी चढ्ने शौख गर्छिन्।
माननीयको हाननीय बानी
आफैँ रक्षक, आफैँ भक्षक ! यो कस्तो शिष्टता अनि विवेकशीलता ! आफैँ नियम कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेर जनतालाई पनि नियमसंगत ढंगले चल्न सिकाउने तहमा पुगेका व्यक्ति नै अराजक भयो भने त्यो मुलुकको हालत के होला ?
लामो समय नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को नेतृत्व गर्दै आएका पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे केही वर्ष हल्लीखल्लीबाट हराएका थिए। जनताले सोचे, उनले सायद पार्टीबाट रिटायरमेन्ट लिए कि !